Ahoana ny fampiasana Konqueror amin'ny Webkit | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fampiasana Konqueror amin'ny Webkit
Betsaka amintsika no mahalala Konqueror, ny tranonkala sy ny rakitra fitetezana izay tonga amin'ny alalàn'ny KDE ary inona no mampiasa ny moto KHTML, avy aiza izy io WebKit (Novakiako ny sasany amin'izany). Konqueror fa KDE na inona na inona Internet Explorer a Windows 🙂
Ny fanontaniana dia hoe, inona KHTML Tsy mitondra tena araka ny itiavantsika azy io, satria ny singa sasany amin'ireo pejin-tranonkala dia tsy aseho tsara, fa manana safidy hampiasa Webkit ka ndao hojerentsika ny fomba hanaovana azy.
Ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny fametrahana ny fonosana kpart-webkit, farafaharatsiny ao Debian manana an'io anarana io izy. Raha tsy manana izany isika dia efa mahalala izay hatao, manokatra terminal izahay ary mametraka:
Tonga ho azy rehefa mankany Konqueror »Preferensi» Configure Konqueror ho hitantsika voafantina Webkit toy ny motera:
Ankehitriny .. ny hevitro manokana momba ny Konqueror Tsy ny tsara indrindra hoy isika .. Mahatsiaro ho miadana kokoa aho noho ireo ambin'ny safidy hafa, ary tsy misy fampiasa amin'ny fampiasa sy fanaingoana azy io.
Saingy tsy dia ratsy loatra .. Raha ny tena marina dia omeko azy ny fotoana hiarahana amiko Firefox.. andao hojerentsika ny fihetsiny 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana ny fampiasana Konqueror amin'ny Webkit
Araka ny nolazainao dia tokony omentsika fotoana izy io, na dia milaza ny marina aza aho dia tsy manome fanantenana an'i Konqueror ... angamba zavatra mitovy amin'ny IE ihany izany, raha tsy hoe tsy mahomby daholo ny zava-drehetra dia tsy mila izany ianao
Tiako ianao avelanao ho an'ny kde mba handray ny rekonq ho toy ny tranokala mpanara-maso azy (amin'izay izy ireo handinika bebe kokoa azy)
Nampiasa konqueror nandritra ny taona maro aho, na dia nampiasa kde aza ary tsara rehefa ampiasaina amin'ny webkit, tranokala maivana sy haingana izy io, manana izay ilaina izy io ary tsy mandany ny loharanon'ny rafitra (firefox) ary tsy spyware ( chrome)
Tsy mpampiasa Konkeror aho, fa te hanandrana azy (satria tsy afaka mamafa azy aho, mba tsy handany toerana ... XD), saingy manana fanontaniana roa aho:
1) Avelan'ny webkit hampiasa ny kinova google vaovao? (amin'ny fotoana hidirako dia asehony ahy ny vehivavy antitra)
2) ahoana no fomba handefasako ny mpandraharaha mpampiasa? (Te-hametraka amin'ny linux aho hatramin'ny nidiran'ny distro)
Vao nanandrana ny google aho dia tsy mandeha: /
"Konqueror dia ny KDE izay Internet Explorer dia Windows"
Vao nanandrana an'ity safidy ity aho ary mandeha tsara aloha izao. Hanandrana an'i Konqueror aho.
Misaotra amin'ny tendrony;)!
Sambany aho mampiasa konqueror mihoatra ny 1 ora, haingana, ary mandraka ankehitriny tsy misy zavatra hafahafa.
Diso angamba aho fa raha ny fahazoako azy dia tsy nahazo fanavaozana efa ela ny konqueror. Izany no mahatonga ny fizarana KDE maro hametraka an'i Rekonq ho default.
Hanandrana aho misaotra 😀
Satria i Konqueror dia tsy mandray ny webkit ho maotera misy azy ary voila!
Konqueror dia mpitety tranonkala toy ny hafa rehetra ary anjaran'ny tsirairay ny mampiasa azy na tsia, miankina amin'ny filantsika izany rehetra izany. Ny zavatra tiako momba an'i Konqueror raha oharina amin'ny hafa dia mandany loharano vitsy, raha ny fahitako azy dia hafainganam-pandeha hafa ihany, afaka manokatra tranokala amin'ny takelaka iray ianao ary ny lisitry ny rafitra iray amin'ny iray hafa, mamokatra ho ahy io; ho an'ireo izay mitaraina amin'ny fisehoan'ny rindranasa: mifangaro tsara amin'ny KDE (ao anatin'ny XD io mihitsy), ny mpitantana ny fampidinana azy dia mamela ny fisintomana ny sary rehetra na amin'ny tranga hafa ny horonan-tsary avy amin'ny tranokala nefa tsy mila mametraka plugin akory, ankoatry ny zavatra hafa izay tsy tonga ao an-tsaina izao.
Na dia marina aza fa tsy manana zavatra maro izy io raha ampitahaina amin'ny Firefox goavambe na zavatra Chrome. Na dia tsy ny tsara indrindra misy aza izany dia nomeko fotoana foana izany.
5 min amin'ny fampiasana azy miaraka amin'ity fanovana ity ary mbola tsy dia mahasalama ahy izany hahaha tsy izany no heveriko fa tsy mifanaraka amin'ilay mpikaroka tranonkala ity.
Nandritra ny fotoana ela aho no nanandrana nanandrana ny konqueror, manandrana mampiasa azy foana aho ary tsy maharitra iray andro, dia ho resaka fampiasana azy io mandritra ny fotoana lava kokoa ny famakafakana ny fomba fitondran-tenany.
Heveriko fa ny distros hafa fonosana dia matetika antsoina hoe Kwebkitpart. Somary miala tsiny amin'i Konqueror aho: nisy fotoana nitovizany tamin'i KDE. Nanao ny zava-drehetra izy. Enga anie ka hateraka indray.
Tokony hiresaka amin'ny olona ao amin'ny KDE isika raha hijery ny antony mbola ananany Konqueror.
Mitandrema, marina fa i Konqueror dia efa an-taonany maro ny hazakazaka sy ny sainam-birao satria manana ny fiasa roa izy amin'ny fiasana ho mpitantana rakitra eo an-toerana sy ny fanamorana ny fitetezana tranonkala, ary heveriko fa avy am-pelatanany tamin'ny fotoanany io satria Microsoft dia nanolo-kevitra ny hampivondrona ny Explorer sy ny IE amin'ny fampiharana tokana alohan'izay ho vanim-potoana "rahona". Noho izany, hevitra tsara izany, nahavita tsara izy ireo, na nanana loharanom-pahalalana ara-teknika hanaovana izany izy ireo na tsara raha nanao azy tamin'ny sehatra toa an'i Windows izay misy idiran'ny IE sy Explorer lalina amin'ny rafitra. lohahevitra hafa.
rekonq na eo aza ny asa rehetra ananan'io dia mitohy manana lesoka maro, hitako manokana fa safidy tsara kokoa i Qupzilla. Dolphin, etsy ankilany, no mpitantana rakitra tsara indrindra amin'ny sehatra rehetra, tsy misy isalasalana ny momba an'izany ary ampianay ny fampifangaroana azy amin'ny Nepomuk izay mamela ny fitantanana antontan-taratasy sy lahatahiry tsy misy dikany mifototra amin'ny datin'ny fanovàny, tanjona ho an'ny tsipika miankohoka.
Ho an'ny fiampangana ara-pientanam-po bebe kokoa izay ananan'i Konqueror, heveriko fa tsy azo ihodivirana fa amin'ny fotoana sasany dia hiala sasatra izy satria ny fampiasa azy dia mihoatra lavitra noho ny asa maoderina maodely kokoa
Ho ela velona ianao Konqueror!
Ny marina dia hoe miaraka amin'i Chrome sy Firefox dia tsy fahita firy raha misy mampiasa zavatra hafa ...
Rehefa mampiasa azy amin'ny webkit dia manatsara be ny fihetsika, misaotra amin'ny tendron'ny Elav !!
Aorian'ny fandefasana azy tanteraka dia toa tsara be izy, tiako izany.
Diego, ahoana no nanehoanao ny konqueror hampiseho ny distro anao? Niezaka nanova ilay mpampiasa aho fa ireo tonga tsy misy kosa dia tsy avelako hanova azy ireo mba hampisehoana ny distro ampiasako.
Na dia tsy Diego aza aho dia mamaly anao ihany aho:
mandeha http://www.useragentstring.com ary adikao ny kofehy izay mampiseho anao eo, avy eo ampio ny anaran'ny distro sy ny biraoo aorian'ny dikan-Linux nosarahin'ny semicolons, ohatra:
[…] Linux x86_64; your_distro; KDE) […]
Misaotra msx !! Afaka nanaraka ireo dingana ireo aho http://www.useragentstring.com fa ny konqueror dia tsy mamela ny manova ny useragent amin'ny tanana, ao amin'ilay rohy nomenao ahy dia ekeny ilay fiovana, fa tsy azoko atao ny mandika izany amin'ny konqueror.
Mbola manontany ihany aho: misy dikany ve ny fampiasana Konqueror? Rekonq efa misy, Arora na Qupzilla, mpitety tranonkala web maivana sy matanjaka ary azo ovaina tsy haiko hoe hatraiza ny lanjan'i Konqueror no ampiasaina using
Efa ela aho no nampiasa kde ary izao vao manome fotoana ny konqueror, lazaiko anao fa maivana izany, ara-maso dia tsy eo amin'ny ambaratongan'ny lehibe toa ny Firefox, Chrome / Chromium na Opera fa ao amin'ny ankapobeny dia mandeha tsara izy io, raha ny tena te-hampiasa azy io noho ny te hahafanta-javatra.
misaotra amin'ny tendrony sy famihinana lehibe !!
Skrip hanamorana ny fampandrosoana ao amin'ny PHP sy MySQL